Inona avy ireo oniversite manana ekipa bisikileta? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Kolejy bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Kolejy bisikileta - mamaly ireo fanontaniana
Inona avy ireo oniversite manana ekipa bisikileta?
Lisitry ny bisikileta Collegiate
Butteambaratonga ambony IZAY WCCC
CaliforniaInstitute of Technology IZAY WCCC
Californialoteraninaanjerimanontolo IZAY WCCC
CaliforniaPolytechnic-San Luis Obispo IZAY WCCC
Mihevitra ny olona fa tsy misy afa-tsy amin'ny baskety ihany no ataontsika, voafetra amin'ny lalao baolina kitra sy atletisma isika. Tsy dia toy izany ny hoe Afrikanina amerikana. Tianay ny ho tafiditra eto amin'izao tontolo izao toy ny olon-drehetra ihany.
Ny Oniversiten'i St. Augustine dia naorin'ny fiangonana Episkopaly tamin'ny 1867. Ny HBCU dia nampianatra sy niofana mainty hoditra indrindra.
Nanana mpikaroka iray eto aho izay liana fatratra amin'ny bisikileta ary nahita fomba hanaparitahany azy io amin'ny programa iray sy fampiharana azy. Misy klioba bisikileta manerana ny firenena izay manana mpitaingina mainty, saingy tsy mbola nisy ekipa bisikileta tao amin'ny campus HBCU nilaza tamiko fa hevitra ny bisikileta ary hoy aho hoe: 'Tsy haiko raha mifanaraka amin'ny traikefa HBCU ny bisikileta.' Dr.
Hoy i Janas: 'Andao hojerentsika ny Major Taylor.' Major Taylor dia mpitaingina bisikileta afrikanina afrikanina, tompona firaketana an'izao tontolo izao ary tompon-daka eran-tany tamin'ny bisikileta tamin'ny faran'ny taonjato faha-19. Raha nijery ny tantaran'i Major Taylor aho dia nilaza hoe: 'Ralehilahy, mety izany, ity izy.' Tonga lafatra io, ny fomba fampifandraisantsika ny tantaran'ny HBCU sy ny tantaran'i Major Taylor.
Hitanay haingana fa tsy misy ekipa HBCU hafa ao amin'ny firenena. Tamin'izay no fantatray fa tsy maintsy nataonay izany. Tsy afaka nieritreritra izy ireo.
Nampianatra ara-bakiteny ny fifandanjana, ny zoro ary ny fanovana ifotony izahay. Ireo zavatra rehetra raisintsika ho mpitaingina bisikileta ireo dia tsy azontsika atao ambanin-javatra. Nanomboka nivoaka tsy nisy fitaovana izahay, ary saika tsy nisy fanandramana ivelan'ny nitaingina ireo mpianatra ireo fony izy mbola kely.
fiofanana momba ny fiaretana bisikileta
Ataovy izany rehefa miteny aho, mandehana fotsiny ary ataovy ny fanamarinana ny bisikiletanao. Hamarino tsara fa mihodina mora foana ny kodiarana ary alao antoka fa mandeha ny freins. Hamarino tsara fa tsy malalaka ny loha-taratasinao.
Azonao atao ny mifehy ny kodiarana, ny kodiarana eo anelanelan'ny tongotrao, ary alao antoka fa tsy misy malalaka. Manana clip aho eo ambanin'ny kiraroko. Sambany aho nahafantatra hoe inona ireo clip ary manandrana tsindrio ny pedal anao.
Tena sarotra ny fampiofanana. Heveriko fa tsy takatry ny olona fa ny bisikileta dia tsy resaka pedal ihany. Tena henjana izy io, tsy handainga aho.
Efa haiko ny mandeha bisikileta. Fa ny kodiarana ananantsika kosa dia manify kokoa ary somary teritery kely kokoa ny kiran-tànana. Tsy maintsy nianatra zavatra be dia be isika: ny fomba famadihana ny zoro, ny fitaovana hampiasana.
Ny ankamaroan'ny ankizy mainty hoditra dia milaza fa fanatanjahan-tena fotsy ity. Tsy fanatanjahan-tena ankafizintsika ity. Maninona raha atombohy ny ekipa bisikileta HBCU voalohany rehefa manana zanaka HBCU be dia be ianao izay tia mitaingina bisikileta? Mino aho fa ity ekipa ity dia hanova ny fomba fahitan'ny olona ny fetra afrikanina amerikana.
Ny andraikitry ny ekipa amin'ny fahamarinana ara-pirazanana dia ny mitondra ny fahasamihafana amin'ny fanatanjahantena. Ny olona rehetra ao amin'ny ekipa dia razambe afrikanina. Manova ny sain'ny olona momba ny fanavakavaham-bolon-koditra isika.
Mety ho revolisionera ho an'ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny izany. Faly fotsiny aho fa anisan'ny tantara ary manoratra tantara tsy tapaka ho an'ny olon-kafa. Mahatsiaro ho toy ny Trailblazer aho nandritra ny fotoana kelikely.
Izaho foana no te handray ny dingana voalohany. Ny zava-dehibe indrindra amintsika dia ny fampisehoana fa afaka mitondra fahasamihafana amin'ny zavatra rehetra isika. Izay no fahitako azy.
Izay no zava-dehibe indrindra amiko.
Afaka mahazo vatsim-pianarana amin'ny bisikileta ve ianao?
Misy vevatsim-pianaranamisy amin'nybisikileta? Eny ary tsia! Hatramin'ny oniversitebisikiletaTsy tantanan'ny NCAA na NAIA, tsy misy andrim-panjakanamanam-pahaizanafetra napetraky ny filan-kevi-pitantanana tsirairay avy.
Ao amin'ny GMBN, sambatra izahay fa afaka nanova ny fitiavantsika ny bisikileta an-tendrombohitra ho lasa asanay. Ahoana anefa no anaovanao an'izany? Ary karazana asa inona no azonao eritreretina hamolavola ny fiainanao amin'ny bisikileta an-tendrombohitra? Ho gaga ianao fa firy ny safidinao, andao jerena ity. (Mozika elektronika miala sasatra) Ka voalohany indrindra, aiza no hanombohanao azy? Eny, rehefa mbola mianatra ianao dia afaka manomboka miahiahy momba ny karazana fahaiza-manao sy fiofanana ilainao hanombohana amin'ny lala-mahitsy.
Ny fakana sary sy ny fanoratana dia fahaiza-manao matanjaka ho an'ny sehatry ny haino aman-jery. Raha tsy izany, raha te hihazakazaka matihanina ianao, ny hazakazaka sy ny vokatra lehibe dia mitarika ho amin'ny fotoana mety. Vaovao ny matematika nataonao.
Ary ny fihazana asa? Mazava ho azy fa afaka manomboka tranokala asa mahazatra ianao ary mikaroka asa indostrialy, saingy matetika ny asa mety dia tsy dia mora hita amin'ireto karazana tranonkala ireto. Soa ihany fa misy tranokala asa bisikileta natokana izay manome safidy betsaka lavitra. Loharanom-pitaovana lehibe any Angletera ny BikeBizand any Etazonia, mpivarotra antsinjarany.
Misy ny asa izay miainga avy amin'ny mekanika fivarotana ka hatramin'ny varotra ka hatramin'ny mpitantana marika ary na ny mpanao gazety aza mandalo. Ny loharanom-pahalalana hafa dia ny marika toa ny SRAM, Shimano ary Santa Cruz, ohatra, matetika mahita asa ary na dia ny fiofanana aza izay doka amin'ny tranokalan'ny asany manokana. Raha tsy izany dia mitady tanana manampy hatrany ny fivarotana bisikileta sy ny làlan'ny bisikileta eo an-toerana, indrindra amin'ny vanim-potoana avo lenta.
Ny sasany amin'ireo loharanom-pahalalana hitanay dia eto amin'ny famaritana etsy ambany. Ny fijanonana voalohany ho an'ny ankamaroan'ny mpitaingina izay te-hivelona amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia ny manohana ny mitaingina azy. Tena nofinofy izany, satria iza no te-tsy handray karama hitondra fiara sy hahazo fitaovana maimaim-poana miaraka amin'izay? Mamiratra izy io.
Mora kokoa ny milaza azy noho ny vita, tsy maintsy haingana be ianao, mahomby, na tena mahay manintona, fa azo atao izany. Na dia misy fomba vitsivitsy hafa hananganana ny fomba fanao sy ny media sosialy hanaraka ny sosialy ho lasa ambasadaoro, mpanao fanatanjahan-tena amin'ny fomba fiainana na influencer. Ny fomba iray hafa ahazoana karama fanatanjahan-tena mitondra fiara dia ny mitondra fiara ary lasa mpanazatra teknika mitondra fiara na mpitari-dalana.
Mahazo vola ianao mivoaka amin'ny bisikiletanao ary mihaza izany rehetra izany nefa tsy misy mpanohana na mpanaraka anao. Mbola fomba iray hafa ahazoana karama hitondra fiara amin'ny fampianarana ny hafa. Ny coaching amin'ny fahaiza-manao dia ahafahanao mandray karama mitaingina bisikileta eo am-panampiana ny hafa ho lasa mpitaingina tsara kokoa.
Asa tena manome valisoa izay mbola tena momba ny fitondrana fiara.- Neil no anarako, mpila hazakazaka matihanina taloha aho. Ary mpampiofana bisikileta matihanina teo aloha.
Ary niditra aho, raha milaza ny marina tanteraka, satria somary reraka. Rehefa vitako ny hazakazaka midina dia tsy azoko izay hatao manaraka. Ary ny fiofanana momba ny fahaizana dia toy ny zavatra voajanahary.
bisikileta amin'ny seza
Mbola afaka nitaingina bisikileta aho ary nanomboka teo dia niverina nanao hazakazaka indray, ka nanomboka nihazakazaka enduro. Karazana matihanina indray, nahazo mpanohana tsara, ka amin'ny maha mpanazatra antsasaky ny hazakazaka ahy ahy dia izaho izay. Heveriko fa ny torohevitro dia, raha ny marina, manaova fampihetseham-batana tsara.
Nataoko teo am-piandohana niaraka tamin'ny fikambanana iray tany Angletera antsoina hoe CTC, efa mpamily matihanina aho nandritra ny 10 taona fa ny fanavakavahana ny familiana olon-kafa dia tena mila fahaizana kely ary mety mila fanampiana kely amin'izany ianao dia miasa fotsiny momba ny traikefa. Izaho dia mpanazatra matetika, matetika dia nahita olona 30 na 40 isan-kerinandro. Ary raha ny marina, herintaona na roa taona dia tena hanangana ny fahaizanao izany.
Azonao atao ny mijery olona mitondra fiara, maka sary azy ireo ary mifantina izay heverinao fa tsara vitany, izay afaka manampy ny fahatokisany azy, nefa koa inona no azon'izy ireo atao tsara kokoa, ary indraindray dia zavatra roa na telo tena kely fotsiny no mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa Can manaova fiovana lehibe amin'ny dianao, na marina ny toeran'ny tongotra, ny fanovana kely ny fanamboarana ny bisikiletanao, na ny fahitana fahaiza-manao bisikileta manokana izay tokony handika tena ho fanatsarana. Ary zavatra tena mendrika izany. Mety ho tena mahafinaritra.
Ny tiako holazaina dia ny lafy ratsy indraindray dia toa mitaingina be ianao, fa raha ny marina dia afaka mandeha sy mijoro amin'ny toerana iray isan'andro ianao ary miresaka amin'ny olona momba ny olana mitovy amin'izany, zavatra hitanao tamin'ny andro hafa. Ka mety hiverimberina kely indraindray. Fa amin'ny faran'ny andro, raha tena manampy olona hanatsara ny fivezivezeny ianao, ary mandeha bisikileta ny tenanao dia mety ho tsara izany. (mozika ska miakatra) - Ny fomba tsotra indrindra hahitana asa amin'ny sehatry ny bisikileta dia ny miasa ao amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana.
Izy io angamba no teboka fidirana tsara indrindra ary mamela anao handeha ao ambadiky ny seho, mahita ny sehatra ary hijery hoe ohatrinona ny asany. Azonao atao koa ny mahazo fampahalalana anaty ary mety hihaona amin'ny olona mahafinaritra be eny an-dalana. Mihaona amin'ny olona mety ary mety hahazoanao fotoana hanaovana andraikitra mahaliana kokoa ao amin'ny indostria ianao.
Betsaka ny mpanao gazety bisikileta sy mekanika hazakazaka novolavola nataonao tamin'ny orinasan-dry zareo. Ka toerana tsara hanombohana ny asanao amin'ny indostria. Ny mekanika bisikileta malaza dia i Danny MacAskill ary i Henry on Tech antsika manokana.
Izay mekanika hazakazaka amboara eran-tany fanta-daza hatramin'ny vao haingana. Ka andao haka fahalalana kely kokoa avy aminy - izaho Henry, 27 taona aho ary avy any West Midlands, mekanika foana ny toerako, manomboka amin'ny atrikasa alohan'ny hiatrehako amin'ireo ekipa mpihazakazaka. Niditra tao aho, tiako foana ny miasa bisikileta.
Ary ny fahitana ny fomba ahazoana karama amin'izany rehefa nandao ny sekoly aho dia toa tanjoko kely. Vao nanomboka niasa tao amin'ny magazay teo an-toerana ary nanapa-kevitra ny handeha. Nihaza ny vanim-potoana fahavaratra aho.
Tena tsara izany, midika izany fa nahafantatra mekanika mahafinaritra be dia be aho hianarako, ary koa toerana maro samihafa. Tsy maintsy nandeha bisikileta aho, nihaona tamin'ny olona mahafinaritra izay manao toy izany koa, ary amin'ny farany dia latsaka amin'ny vanim-potoana fifaninanana. Niditra tao amin'ny indostrian'ny bisikileta aho, izahay Rehefa avy nianatra dia te hianatra hanan-karena amin'ny fitiavako fotsiny aho.
Nanomboka niasa tamina magazay teo an-toerana aho tamin'ny voalohany alohan'ny nanapahako hevitra hanenjika ny fahavaratra sy hivezivezena eo amin'ny hemispera avaratra sy atsimo ary hitondra bisikileta mandritra ny taona. Tena tsara izany satria tsy nahalala olona mitovy saina be fotsiny aho fa nianatra tamin'ny mekanika tena mahay koa. Raha tsy maintsy manome torohevitra momba ny fidirana amina asa mitovy amin'izany aho, dia mety tsy hatahotra hanao risika na hanao zavatra mety tsy dia mahazatra loatra.
Fony aho 18 na 19 taona ary ny namako rehetra dia tany amin'ny anjerimanontolo, hoy fotsiny aho, marina, te-handeha bisikileta aho ary izany no fomba fiasa, nisy ny zavatra tsy nandeha, nisy ny zavatra mandeha. Fa tsara foana amin'ny farany. Manantena ny tsara indrindra, miomàna ho an'ny ratsy indrindra, izany no teniko rehefa mandeha aho.
Nandehandeha nitahiry vola be foana aho, na dia indraindray aza, tadidiko fa nidina hatramin'ny dimy dolara Nouvelle-Zélande indray mandeha ary dia izay ihany, saingy avy eo dia nety tsara ilay izy ka tsara vintana aho raha ny eritreritro, saingy azo antoka fa naka loza mety hitranga, indrindra rehefa mandeha eo anelanelan'i Frantsa sy New Zealand, indraindray aho mitady asa azoko ianteherana ary izy ireo no nanao. tsy azo tanterahina tanteraka. Fa ny mifanohitra amin'izay, indraindray aho vao nahazo asa tena tsara nefa tsy nampoiziko.
Fa maninona no tiako izany? Eny, faly fotsiny aho fa afaka miara-miasa amin'ny zavatra tena tiako. Fa dingana mahafinaritra tokoa ho ahy ny mianatra fahaizana vaovao, indrindra eo amin'ny sehatry ny moto sy mekanika. Ary ny fiaraha-miasa amin'ny olona sasany izay tena hajainao.
Amin'ny fivarotana sasany niasako, tena tsara ny mekanika. Ary ny fahafahany mianatra avy amin'izy ireo dia nahafa-po tokoa. Rehefa nandao ny sekoly aho dia nieritreritra foana fa ny lasa mekanika bisikileta no nofiko.
Tiako fotsiny ny karamaina amin'izany. Ary farany tsy nianatra fotsiny fa avy eo nampianatra, zavatra tena mahafinaritra ahy izany, ny niasa tamin'ny Tompondaka Erantany dia zavatra tiako hatao foana. Ary tena nahafa-po ahy ny faniriako hahatratra an'io ambaratonga io - Ny miasa ao amin'ny sampan'ny haino aman-jery amin'ny indostrian'ny bisikileta dia asa nofinofy mety ho an'ny mpitaingin-tsoavaly maro.
Jereo daholo ny lahatsoratra ary jereo ny lahatsoratra rehetra ary mieritreritra ianao fa afaka mitaingina azy ihany. Fantatrao hoe inona no azonao andraisana an'io andraikitra io, misy fomba vitsivitsy izay hahatonga anao eo afovoan'ny sehatra fampahalalam-baovao MTB. Ny ankamaroan'ny fotoana dia momba ny fanoratana, ny fanaovana sary an-tsary, ny media sosialy.
freins bisikileta fikosehana
Saingy somary miovaova kely ny andraikitra tena izy. Eto amin'ny GMBN isika dia manana ny ankamaroan'ny asan'ny haino aman-jery. Mety tsy mieritreritra ianao fa manana ny fahaiza-manao sy talenta mety amin'ny hazakazaka matihanina mba hitondra fiara, ny tiako holazaina dia tsy maro no manana.
Saingy mbola afaka mandray karama ianao amin'ny familiana, sa tsy izany? Raha manoratra momba ny bisikileta ianao dia afaka mahazo ny ampahany vaovao sy mahaliana indrindra amin'ilay kitapo mialoha ny besinimaro, ary milamina io kit io dia milay ihany. Ny fahafantarana fa vitsy ny mpitaingina nahita an'io akory. Fa andao handrenesana olona iray izay nanao ny asa fanaovan-gazety momba ny bisikileta an-tendrombohitra.- Andrew Dodd no anarako, antsoin'ny olona hoe Doddy aho, raha ny marina dia antsoin'ny rehetra hoe Doddy aho.
Hafahafa kely fotsiny, antsoy fotsiny aho hoe Andrew ho marin-toetra. Izaho no talen'ny teknolojia, raha ny marina ao amin'ny fantsona teknolojia GMBN. Ho anao sy ho ahy dia midika fotsiny izany fa moderator aho ary mandamina kely.
Izaho dia mpanao gazety amin'ny bisikileta nandritra ny andro niasako, nanomboka ny taona 2001, niasa tamin'ny iray amin'ireo magazina bisikileta an-tendrombohitra lehibe indrindra aho, Mountain Biking UK. Nampiasa fitambarana sary sy haino aman-jery izay nianarako aho. Fahalalana amin'ny teny anglisy ary mazava ho azy fa tandindon'ny teny voasoratra.
Ary rehefa nanomboka niova ny zava-drehetra, mankany amin'ny sary mihetsika, fanapahan-kevitra lojika ho ahy ny miasa eto. Fahaiza-mifindra, haiko ny miresaka momba ny bisikileta, azoko ny bisikileta, mitovy amin'ny soratra izany ka mitovy endrika io. Na mitovy, farafaharatsiny.
Mianara mafy, ankafizo ihany koa ny zavatra ataonao. Raha tsy tianao ilay izy. (samy mihomehy ny mpamily roa) Tsy azoko akory ny tiako holazaina! Tsy voafehy fotsiny aho nandritra ny fotoana rehetra! - Fahafinaretana firy izany? - Tsy maintsy mieritreritra ny zavatra ataonao ianao.
Mazava ho azy fa mila fahalalana fototra tsara ianao, izany hoe mahay teny anglisy tsara. ny fahaizana manoratra sy miteny tsara.- Ao Frejus dia eo anelanelan'ny Frejus sy Roquebrune, Roquebrune, Roquebrune-sur-Argens.
Roquebrune, Roquebrune-sur-Argens. Roquebrune-sur-. Argens.- Tena mahalala momba ny bisikileta mba hahafahanao miasa tapa-potoana ao amin'ny fivarotana bisikileta amin'ny faran'ny herinandro, ity dia fomba tsara hananganana ireo fahaiza-manao mekanika sy zavatra ary handefa azy ireo amin'ny namanao.
Tsy mila fitaovana milay ianao fa azonao atao amin'ny telefaona fotsiny izany. Ny telefaona mety hahitanao an'ity. Ary ny indostrian'ny bisikileta dia toerana kely mahagaga.
Feno olona tiako sy fantatro tsara, noho izany, tiako izany, fa ny bisikileta no tiako indrindra eto amin'izao tontolo izao koa. Toy izany foana izy ireo. Ny famakiana ny laharana voalohany an'ny Mountain Biking UK, Oktobra 1988.
Efa nandeha bisikileta efa ela aho, koa maninona no mbola hanao zavatra hafa? - Matetika kokoa, miaraka amin'ny fahafaha-miasa tsy miankina, ny lalam-piofanana dia tsy hitsambikina ho asa maharitra amin'ny asa fanaovan-gazety MTB, saingy azo hatsangana ary fomba tsara hihaonana amin'ny olona avy amin'ny indostria ary hanao fifandraisana manan-danja. Ary ahoana ny amin'ny zavatra ho mpamorona fahitana bebe kokoa? Eny, ny fanaovana lahatsoratra dia mety ho ny toe-javatra mety, tiantsika rehetra ny fanitsiana bisikileta an-tendrombohitra ary ny fahaizana mamorona sy mamorona lahatsoratra tadiavin'ny rehetra jerena dia tena mahafinaritra, saingy ampy ahy, manana mpanakanto lahatsoratra ampy tsara eto isika. momba izany noho izaho.- Tom Grundy aho ary ny toerana misy ahy ankehitriny dia Mpamorona, na fantatra amin'ny anarana hoe Filmmaker, hoy aho.
Fandraisana an-tsary sy fanovana ny lahatsoratra eto amin'ny GMBN Nihevitra izahay sy ny namako fa inona izany? Tsara ny maka sary, na farafaharatsiny mba maka sary. Ka navoakako an-tsokosoko tao ivelan'ny trano ny fakantsarin'i Neny ary nanao lahatsoratra kely tamin'ny palsako aho, napetrako tamin'ny internet ary nanomboka teo dia tsy afaka tanana intsony. Tena tiako ny nanao an'io ary zavatra mety ho fantatro amin'ny fiainako izany, avy eo dia nifantoka tamin'ny fanaovana lahatsoratra bebe kokoa aho ary mianatra ny asa-tanana amin'ny fanaovana sarimihetsika ary mametraka ireo sarimihetsika ireo amin'ny Internet.
famerenana bisikileta an-tendrombohitra 2016
Torohevitra ho an'ny olona mitady hiditra ao amin'ny indostria dia ny hoe tsy maintsy tianao io voalohany satria manantena aho fa handany ny fotoanao rehetra amin'izany. Ary mila fanoloran-tena be dia be, hoy aho, mandeha amin'ny hetsika, mandeha amin'ny hazakazaka, izany no nataoko voalohany, dia ny fidinana an-tanety ary avy eo ny kaopy eran-tany. Hanao sarimihetsika mandritra ny herinandro aho, hanao horonantsary mandritra ny iray volana aho ary hamono tena hanao zavatra bebe kokoa ary hamoaka izany.
Ary asehoy amin'ny olona fa manolo-tena ianao. Saingy tokony ho tianao izany, saingy heveriko fa io no zava-dehibe indrindra satria handany fotoana be amin'izany ianao ary noho izany dia tokony ho fitiavanao. Heveriko fa satria misy lafiny maro samihafa amin'ny fanaovana sarimihetsika, eto amin'ny GMBN dia mivoaka ianao ary manao sary, na maka sary an-tsaina ianao ary avy eo maka sary ary avy eo mivoaka any anaty ala ianao ary any ivelany dia mamorona, nefa koa mitaingina bisikileta.
Mamolavola hevitra sy hevitra ary avy eo miara-miasa amin'ny olon-kafa. Ary avy eo rehefa miverina ianao dia miverina ary manitsy ary lafiny hafa tanteraka amin'ny zavatra izany avy eo aforeto ity sombin-kevitra ity miaraka amina hevitra hitanao, dia miova hatrany ny hevitra. Ary avy eo dia ho hitanao ny fomba hivoahan'izy ireo amin'izao tontolo izao sy hahitanao izay eritreritry ny olona momba azy ary angamba hianarana avy amin'izany ary avy eo manomboka indray ny fizotrany.
Ny fizotrany dia miovaova sy mahafinaritra, mamorona, mahaliana ary somary teknika ihany, misy singa maro samihafa amin'ny fanaovana sary mihetsika izay heveriko fa tiako ary mahaliana foana. (mozika elektronika manentana) - Betsaka ny asa tsy mitovy amin'ny fananganana marika, tsy ny lehilahy ambony ihany no mandray fanapahan-kevitra lehibe. Manomboka amin'ny injeniera sy mpamorona ka hatramin'ny varotra sy marketing, orinasa fotsiny ireo marika.
Ary tsy maintsy mameno ny andraikitra mahazatra rehetra izy ireo. Ary izy ireo koa dia toerana mety hahitanao ny lalana mankany amin'ny indostria. Mety hieritreritra ianao izao fa ny bisikileta atolotra amin'izao fotoana izao dia tsy tena tadiavinao, diso daholo izy ireo, ary mieritreritra ianao fa afaka manao tsaratsara kokoa ka maninona raha atao ilay bisikileta tadiavinao fotsiny? Niditra am-pananganana vetivety ny rafitry ny bisikiletanao izahay tao amin'ny Dirt Shed Show tato ho ato, ary vitako izany taloha.
Ka ahoana ny handehanana lavitra kokoa? Ny indostrian'ny bisikileta dia feno mpamolavola sy injeniera manao ny majika hanatsarana ny diantsika. Ary ity dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahatonga ny bisikileta an-tendrombohitra ho fomba fiainana sy fahasamihafana lehibe amin'ny fanatanjahantena mihitsy. Ny fomba mahazatra indrindra hidirana amin'io lafiny amin'ny indostria io dia amin'ny alalàn'ny fianarana ny famolavolana na ny injeniera any amin'ny oniversite.
Avy any no ahitanao raha misy fiofanana azo atao. Ny ankamaroan'ny marika dia manao doka an'ireny asa ireny ao amin'ny tranonkalany, saingy mety angamba ny mifandraisa raha misy fomba hafa hiasana eo amin'ny sehatry ny asa raha mbola eny amin'ny oniversite ianao mba handehananao miditra eo am-baravarana.- Ny anarako dia Ken Avery, Izaho dia filoha lefitra misahana ny vokatra sy ny varotra ao amin'ny Vittoria Industries Amerika Avaratra.
Izaho dia afaka mahazaka ireo sokajy atolotra ho an'i Vittoria manerantany amin'ny famolavolana vokatra. Lehibe tamin'ny hazakazaka bisikileta an-tendrombohitra aho. Ary nanomboka nihazakazaka aho tamin'ny faha-11 taonako, tokony ho 30 taona lasa izay.
Hafa mihitsy ny bisikileta tamin'izany. Fa amin'ny ankapobeny ny fitiavana. Izany no izy, nandeha tamin'ny hazakazaka indray mandeha aho ary nanana kodiarana.
Ary nisy matihanina fanta-daza nanome fantsom-panafody ahy satria tsy nanana hose aho. Ary tamin'ny taona 90, ka nampiasa fantsona ny olona. Ary, namonjy ny hazakazako, tamin'ny ankapobeny satria tsy nanao izany aho dia nanana ny zavatra hafa rehetra tamin'izany fotoana izany.
Ary feno fankasitrahana aho fa taorian'io hazakazaka io dia nividy iray aho ary naveriko tamin'io olona io. Ary lasa mpinamana izahay. Ary tany amin'ny lise aho tamin'izay.
Ary ao amin'ny efitrano fianarana, dia variana amin'ny kodiarana fotsiny aho. Ary hanao sary mombamomba ny kodiarana fotsiny aho ao amin'ny efitrano fianarana. Ary hanomboka hampiditra an-dry zareo an'ity fax ity ho matihanina aho! Ary karazan'izy ireo nilaza hoe whoa, adala izany, saingy nanomboka nahazo sitraka ihany koa izy ireo ary nandefa azy ireo tany amin'ny orinasan'ny kodiarana hijerena izay eritreritr'izy ireo.
Ary tsy azo ihodivirana fa nanomboka nitandrina izy ireo. Ary ny nanandrana ahy dia ny tena nanampy. Ary tamin'io fotoana io ihany dia nahazo fahazoan-dàlana UCI ho mpamily hazakazaka aho, nanana fahatokisana bebe kokoa aho teo amin'ny lafiny fifaninanana, ary taorian'ny fianarako dia nivadika asa izy io, ary 20 taona taty aoriana dia mbola eo amin'ny lalao kodiarana ihany aho, ary izaho tiavo, fankasitrahana io varavarana nosokafako fantatrao fantatrao fa hihaona amin'ny olona maro ianao, misy hatrany ny fotoana manodidina anao.
Ary raha afaka manampy olon-kafa ianao dia mety ho zavatra izany, mety ho raha manova kodiarana ianao, dia mety ho ny fomba fananganana bisikiletanao, mety ho ny fanitsiana ny fampiatoana anao, ny fomba hialana amin'ity protokolola ity, na inona na inona hiverina aminao io dia tena mino an'io aho. Fantatrao fa karazan-javatra ny mitaingina bisikileta betsaka, mandeha amina hetsika sasany, miresaka amin'ny olona sasany, jereo ny fomba ahafahanao manampy. Ary izany no fomba tsara indrindra hidirana amin'ity orinasa ity. (mozika elektronika milamina) - Ankehitriny, ahoana raha mifantoka manokana amin'ny marika iray ianao ary mahatsapa fa ianao no olona tsara indrindra hisolo tena azy ireo? Ka maninona no tsy ataonao izany? Matetika ny mpitantana ny marika no seranana antso voalohany ho an'ny haino aman-jery hitana ny marika sy ny fampahalalana ilaina momba ny vokatra.
Matetika ianao dia mila mitondra olona amin'ny diany ary matetika mampiseho ireo vokatra ary mila mahafantatra ny marika anatiny sy ivelany ianao. Tsy asa mora izany, nefa mety hitondra valiny lehibe, indrindra raha tianao ity marika ity. Misaotra nijery ary ampahafantaro anay izay asa tianao hatao amin'ny sehatry ny bisikileta ao amin'ny faritra misy ny fanehoan-kevitra etsy ambany, aza adino koa ny mijery ireo rohy ao amin'ny famaritantsika.
Raha te hahita lahatsoratra misimisy kokoa avy amin'ny GMBN ianao, tsindrio fotsiny eto na eto, tsindrio izao tontolo izao hisoratra anarana, omeo thumbs up izahay dia ho hitanay amin'ny manaraka.
Fanatanjahantena NCAA ve ny bisikileta?
Bisikiletatsy ofisialyNCAAna NAIAfanatanjahan-tena, ny filan-kevi-pitantanana ho an'ny intercollegiatebisikiletadia EtazoniaBisikileta. Ekipa sasany EtazoniaBisikiletany lisitra ho programa varsity dia tsy sokajin'ny sekoly mitovy amin'izany.
Fanatanjahantena fizarana 1 ve ny bisikileta?
Izy io dia tarihin'i Coach Dave Hagen ary mandray anjaraDivisionIzaho dia atletisma. King College'sbisikiletaekipa eken'ny sekoly amin'ny fomba ofisialy ho ekipa varsity. Manome vatsim-pianarana ihany koa izy ary mandoa ny saram-pidirana amin'ny hazakazaka. I Coach Dan Kreiss no mitarika azy ary mifaninana amin'nyDivisionAtleta II.27.09.2012
Fanatanjahantena eny amin'ny oniversite ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
nyNCAAtsy mahalalabisikileta an-tendrombohitramananafanatanjahan-tena, fa ny NationalBisikileta CollegiateNy fikambanana dia manao. nyNCAAtsy mahalalabisikileta an-tendrombohitramananafanatanjahan-tena, fa ny NationalBisikileta CollegiateNy fikambanana dia manao, ary mifehy fihaonambe 10 sy karazany dimy amin'nybisikileta.
Manana ekipa bisikileta an-tendrombohitra ve i Stanford?
Miara-mitaingina eo akaikin'ny mpikambanaStanford, Kalifornia sy ny sisa. NYvondronamiarahaba ny mpitaingin-tsoavaly misy ambaratonga traikefa rehetrabisikiletafifehezana raha izanymananakodiarana sy horonana tianay hamoaka azy!
Fanatanjahantena NCAA ve ny bisikileta an-tendrombohitra?
Na dia mandinika aza ny sekolybisikileta an-tendrombohitraamin'ny kliobafanatanjahan-tena, MampiasaBisikiletamanasokajy an'i Fort Lewis ho ekipa Varsity Division I, ny fizarana kolejim-pianarana ambony eto amin'ny firenena, satria ny sekoly (1) dia mamatsy vola mpiasa mpiofana maharitra ary (2) manome vola vatsim-pianarana ampy hametrahana azy eo amin'ny laharana voalohany amin'ny intercollegiateTENDROMBOHITR'ANDRIAMANITRA...
Fanatanjahantena tena izy ve ny bisikileta?
bisikileta, fampiasana abisikiletaHO AN'NYfanatanjahan-tena, fialamboly, na fitaterana. nyfanatanjahan-tenanybisikiletadia misy hazakaza-jaza matihanina sy mpankafy, izay atao any Eropa, Etazonia, ary Azia. Ny fampiasana fialam-boly nybisikiletadia miparitaka eran'i Eropa sy Etazonia.
Ny isan'ny kaloria entinao amin'ny fampihetseham-batana roa dia miankina amin'ny hamafin'ny faharetanao sy ny halavan'ny fotoana anaovanao azy. Amin'ny ankapobeny,mihazakazakamandoro kaloria bebe kokoanoho ny bisikiletasatria mampiasa hozatra bebe kokoa izy io. Na izany aza,bisikiletamalefaka kokoa amin'ny vatana, ary mety ho vitanao ny manao azy lava na haingana kokoanoho nyianao dia afakamihazakazaka.
Mahazo karama ve ireo atleta D1?
Ny lalàna vaovao izay manan-kery amin'ny 1 Jolay amin'ny fanjakana dimy farafaharatsinyatleta oniversiteho afakamanaovola avy amin'ny fanekena, autographs sy maro hafa. Saingy mbola tsy mety izanykaramaho an'ny tena milalao, na eo aza ny vola amina miliara dolara ho an'ny anjerimanontolo isan-taona.21 2021.
Misy oniversite misy programa amin'ny bisikileta ve?
Avy eo dia jereo ireo sekoly ireo miaraka amina programa amin'ny bisikileta mahafinaritra. Colorado State University (Fort Collins, CO) Eny, ampifandraiso aho! DePauw University (Greencastle, IN) Eny, ampifandraiso aho!
Iza ireo oniversite manana ekipa bisikileta an-tendrombohitra?
Zava-mahaliana: Milligan College dia manasongadina bisikileta an-tendrombohitra ho toy ny spaoro vaovao. Izy io dia mifaninana amin'ny University of East Tennessee State, Lees-McRae College, Brevard College, Appalachian State, University of Tennessee-Knoxville, Union College, ary Warren Wilson College ho mpikambana ao amin'ny Konferansa momba ny bisikileta atsimo atsinanana.
Iza ireo mpikambana amin'ny kaonferansa bisikileta atsimo atsinanana?
Izy io dia mifaninana amin'ny University of East Tennessee State, Lees-McRae College, Brevard College, Appalachian State, University of Tennessee-Knoxville, Union College, ary Warren Wilson College ho mpikambana ao amin'ny Konferansa momba ny bisikileta atsimo atsinanana.